Samadhan News विचार – SAMADHAN NEWS
कोभिड १९ को दोस्रो लहर सुरु भएपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा एकै दिन ६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यो जेठ २० गतेको घटना हो । उक्त घटनालाई लिएर नेपाल सरकार संवेदनशील भएन । प्रदेश सरकारले केही गर्न सकेन । अस्पतालका पदाधिकारी स्वयं अनेक तर्क गरेर घटनामा आफूहरुको कमजोरी नरहेको प्रष्टीकरण दिनमात्रै लागे । त्यसपछि पनि
-समाधान सम्पादकीय- मन्त्रिपरिषद अर्थात पुरुष क्लब मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफू नियुक्त भएको ४० औं दिनमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिए, जुन आफैमा अपूर्ण छ । पूर्णता यसर्थ दिए कि मन्त्रिपरिषदमा राख्न मिल्ने जति ११ जना सदस्य बनाए । अपूर्ण यसर्थ छ कि जजसलाई समेट्नुपर्ने हो समेटेनन् । संख्यामा मात्रै पूर्ण हुँदैमा उनको मन्त्रिपरिषदलाई पूर्ण मान्न सकिन्न
—ब्लग—सुजाता ढकाल म के गर्छु यो देशमा बसेर ? यो प्रश्नको उत्तर सोच्न मेरो क्षमतामा शंका र प्रश्न गर्ने मानिसले बाध्य गरेको थिएन । यो देशमा कुनै अवसरै नदेखी देशबाट टाढा गएर कहिल्यै नफर्किने सोच बनाएको एनआरएनले पनि दबाब पारेको होइन । एउटा यस्तो देशप्रेमीले प्रश्न गरेको थियो जसको पुरै जीवन देशका लागि समर्पित भएर
नेताहरु चुकेकै हुन् वा कतैबाट निर्मित संविधानलाई नेपाली भाषा, झण्डा र गातामा सजाइएको हो ? शंकालु हुन बाध्य भएका छौं शेखर गौतम, नेता, अनेरास्ववियुमेरो देशले अहिले नयाँ प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेको छ । तर भ्रममा नपरौं भर्जिन भने होइनन् । उनी चौथौ पटकसम्म चाखिएर काँक्राको तितौरी फालिए झै फालिएका व्यक्ति हुन । हुन त हलेदो हो
प्राडा भरतराज पहारी पाेखरा ‍-प्रकृतिमा विद्यमान विविधताले मानिसको चेतनामा विविधता सृजना हुनु स्वभाविक हो । यो विविधताबाट सृजना भएको मानिसको जिज्ञासु र साहसी स्वभावको कारणले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा निर्णायक क्षणहरु आए र स्वभाविक गतिमा हिडिरहेको सामाजिक अभियानले हठात फरक दिशा ग्रहण गर्दै गयो । प्रविधिले अग्रगति प्राप्त नगरेको र सूचनाको सामाज्य कमजोर भएको समयमा भौतिकरुपमा
झपट रानाभाटराणाहरूको कोपभाजनमा परेर १४ वर्ष बनारसमा रहँदा बीपी आफैं कम्युनिस्ट थिए । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका क्रममा जेल पर्दासमेत उनमा कम्युनिस्ट प्रभाव थियो । पछि जयप्रकाश नारायणको संगतले समाजवादी बने । बुृवा कृष्णप्रसादको प्रेरणाबाट राजनीतिमा लागेका बीपीले २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना गरे । त्यही राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच एकीकरणपछि भएको सशस्त्र
भानुभक्तका रचनाहरू नेपाली भाषामा अग्रणी रूपमा रहेका छन् । उनले आफ्नो वैयक्तिक प्रतिभाका कारणले नै रामायण लेखे । ुअध्यात्म रामायणु अनुवाद भएर पनि यस कृतिलाई भानुभक्तले मौलिक रूपमा प्रस्तुत गरे । भानुभक्तअघिका नेपाली कविले नेपाली भाषासाहित्यलाई यति सहज, सरल र मौलिक रूपबाट प्रस्तुत गर्न सकेका थिएनन् । त्यसैले भानुभक्तकृत रामायण नेपाली भाषा र साहित्यको पहिलो
सम्पादकीयविज्ञान, प्रविधि र विकासले फड्को मारेको युगमा राणाशासन र पञ्चायती व्यवस्थाबाट गुज्रिएको नेपाल अहिले पनि विकासको गतिमा निकै पछि छ । बारम्बार ऐतिहासिक खालका आन्दोलन भए, लोकतन्त्रका लागि । प्रजातन्त्र स्थापना र त्यसभित्रका अनेक विकृति पनि देखिइरहेका छन् । राणाशासनमा जस्तो दाजुभाइमा मारकाट र सत्ता उलटफेर नभए पनि गणतन्त्रमा पनि स्थिरता र समृद्धिको छाँटकाँट देखिएको
अवरुद्ध सदन र बजेट
सम्पादकीय असार १ गते ल्याएको बजेट यही महिनाभित्र पारित गरिनुपर्नेछ । साउनबाट त अर्काे आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । प्रदेश सरकारले नयाँ हिसाबकिताब सुरु गर्नुपर्छ । बजेट पारित नभए खर्च गर्न पाइन्न । कथंकदाचित बजेट पारित भएन समयभित्रै भने पेस्कीको बाटो रोज्नुपर्छ । जुन सजिलो र सामान्य बाटो होइन । ४ असारमा विश्वासको मत लिएका
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा गाली र ताली
सामन्तवादले आफ्ना सुसारे, हुक्के, बैठकेलाई छोड्न नसकेजस्तै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले आफ्नो परिवार, पद, पैसा र गुटलाई छोड्न सकेनन् ।धनञ्जय दवाडी नेपालका राजनीतिक दलहरुमा विवाद छ । राजनीतिका हरेक दलमा गुट छन् । प्रत्येक दलको नेतृत्व निर्माण गुटका महासंघ जस्तो प्रतीत हुन थालेको छ । एकापसमा गालीगलौज, आरोप प्रत्यारोप सामान्य जस्तो देखिएपनि शब्द चयन र प्रस्तुतिले